Xoogaga General Xuud oo gudaha u galay Beledweyne | Dhacdo
Home Wararka Maanta Xoogaga General Xuud oo gudaha u galay Beledweyne
Xoogaga General Xuud oo gudaha u galay Beledweyne
Ciidamada uu hoggaamiyo General Abuukar Xaaji Warsame (Xuud) ayaa maanta gudaha u galay Magaalada Beledweyne, xilli qaybo ka mida magaalada ay xalay la wareegeen ciidamo militari ah.
Ciidamada General Xuud oo fariisin ku leh deegaanka Ceelgaal ayaa magaalada soo galay, xilli aanay wax iska caabin ah kala kulmin Ciidamada Dowladda Federaalka iyo kuwa Hirshabelle.
General Xuud oo horey uga tirsanaa Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ayaa ka horyimid hannaankii loo maray doorashadii 11-kii bishii November ka dhacday Magaalada Jowhar, laguna soo doortay Madaxweye Guudlaawe.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya in ciidamada u daacadda ah General Xuud ay haatan ku sugan yihiin xaafadda Nuur Xawaad.
Korneyl Cabdullaahi Barre Cilmi, Abaanduulihii hore Guutada 5aad ee Qaybta 27aad ee Ciidanka Xoogga Dalka oo hoggaaminayay ciidamadii xalay la wareegay Xarunta Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay isku saf yihiin ciidamada General Xuud.
Korneyl Cabdullaahi Barre Cilmi ayaa sheegay inay diidan yihiin caburinta lagu hayo dadka reer Hiiraan, ciddii arrintaasi lagala hadli lahaana ay diiday in lagala hadlo.
“Waxaan rabaa inaan caddeeyo dadka caadeystay dhibaatooyinka shacabka reer Hiiraan inaysan maanta ka bacdi u socon doonin.” Ayuu yiri Korneyl Cabdullaahi Barre.
Korneyl Cabdullaahi Barre ayaa mar sii horeysay ciidamada kale ee ku sugan gobolkaasi ugu baaqay inaanan dhexdooda leesku adeegsan.
“Ciidamada Qalabka Sida ee Gobolka Hiiraan yaan ciidamoow leesku kaaya adeegsanin, kiina dhaawac iyo kiina jiran waa laga tagaa, kiina dhinto waxba looma qabto, sidaasi darteed dhimasho iyo dhaawac, dano niman leeyihiin ha u horseedina walaalihiina aad biyaha la cabtaan, la seexataan oo aad la nooshihiin, ayagana ha dilina, ayagana yaynaan idin dilin.” Ayuu yiri korneylku.
Xaaladda Magaalada Beledweyne ayaa maanta degan, ka dib xiisaddii xalay laga dareemay magaaladaasi.
Previous articleFarmaajo oo daahfuray munaasabadda Hirgelinta Guddiga 4aad ee Af Somaliga
Next articleMidowga Musharaxiinta oo ka horyimid habraacyadii Golaha Wadatashiga Qaran